Herintaona tsy nisy Aterineto : tsy afaka niditra an-tserasera ireo Tshadiana nanomboka ny volana Martsa 2018 · Global Voices teny Malagasy
Herintaona tsy nisy Aterineto : tsy afaka niditra an-tserasera ireo Tshadiana nanomboka ny volana Martsa 2018
Sivana atao amin'ny Aterineto any Tchad
Voadika ny 14 Marsa 2019 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, English, Ελληνικά, Italiano, русский, Français
Afisy iray mandrisika ny governemanta Tshadiana hamerina ny fidirana amin’ny Aterineto ho an’ny olom-pireneny. Afisy navoaka tao amin’ny bilaogin’ny Africtivistes niaraka tamin’ny fahazoan-dalàna.
Tsy afaka niditra tamin’ny Aterineto ireo Tshadiana efa ho herintaona izay. Kanefa nankatoavin’ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon’olombelona ho Zon’olombelona ny fahafahana miditra amin’ny Aterineto nanomboka hatramin’ny 1 Jolay 2016. Nijanona ho misitery ny antony nahatonga io famerana ny fidirana amin’ny Aterineto io. Nanazava ny mpamatsy tolotra Aterineto fa noho ny olana ara-tekinika no nahatonga ny fanelingelenana ny tolotry ny Aterineto tamin’ny ankapobeny. Saingy nilaza ny Fikambanana, toy ny Internet sans Frontières fa nanome baiko ny orinasan’ny finday ny fanjakana mba hanatsahatra ny fidirana amin’ny Aterineto. Toa fahavononana ny hampiasa ity sivana ity ho toy ny fitaovana hanampenam-bava ny fahalalahan’ny olom-pirenena haneho hevitra sy ny fivezivezen’ny vaovao malalaka ao Tchad no tanjona.
Ankoatra izany, anisan’ny ambany indrindra eto Afrika ny isan’ireo olom-pirenena afaka miditra amin’ny Aterineto. Raha ny marina, raha toa ka ahitana olona miditra amin’ny aterineto amin’ny salan’isa 37,4% any amin’ny faritra hafa ao Afrika raha oharina amin’ny vahoaka Afrikana iray manontolo, any Tchad kosa dia 5% monja no tahan’ny fidirana amin’ny Aterineto.
Nanoratra i Pablo Michelot, lehiben’ny toniandahatsoratry ny tranonkala miompana amin’ny vaovao eo anivon’ny vondrom-piarahamonina mainty hoditra L'Encre Noir tao anaty lahatsoratra iray, miaraka amin’ny lohateny mampisaina hoe : “Tanànakely iray izay ahitana ireo Tshadiana voahilika izao tontolo izao’’:
Depuis près d’un an maintenant, les réseaux sociaux sont verrouillés dans la République du Tchad suite à une recommandation du pays d’Afrique centrale de reconduire le Président Idriss Déby au-delà de 2030. Selon le dirigeant du pays en 2016 “le Tchad ne peut pas se concentrer sur un système qu’un changement de pouvoir mettrait en difficulté.”
Efa ho herintaona lasa izao, voahidy ny tambajotra sosialy ao amin’ny Repoblikan’ny Tchad taorian’ny torohevitry ny firenena Afrikana Afovoany mba hitazonana ny toeran’ny Filoha Idriss Déby hihoatra ny taona 2030. Raha araka ny filazan’ny mpitondra ny firenena tamin’ny taona 2016 dia “Tsy afaka mifantoka amin’ny rafitra izay hohasarotin'ny fiovan'ny fitondrana i Tchad.”
Nihena 150.000 ny isan’ny mpisera tao Tchad, izany hoe nahitana fihenana 54% ny volana Janoary 2018 ka hatramin’ny volana Janoary 2019. Raha nitombo kosa ny isan’ireo mpisera ny tambajotra sosialy any amin’ny firenena hafa ao amin’ny Kaotinanta,
Raha ny marina, ireo mpikatroka mpiaro ny zon’olombelona no tena iharan’ny famoretana. Nampahatsiahy izany ny ONG Frontline Defenders:
Voarara ny fihetsiketsehana nomanin’ireo izay heverin’ny governemanta fa manakiana ny politikany. Matetika niharan’ny herisetran’ireo mpitandro ny filaminana ireo mpisehatry ny fiarahamonim-pirenena sy ny sendika izay nanomana fihetsiketsehana tsy nahazoan-dalàna.
[…] Matetika iharan’ny fanoherana ireo mpanao gazety, indrindra ireo izay mitantara na maneho hevitra amin’ny olana mifandraika amin’ny Zon’olombelona. Voafetra matetika ny fahalalaham-pitenenana, tao anatin’ny dimy taona farany, nandritra ny fotoan-tsarotra ara-politika.
Tamin’ny 19 Janoary 2019, nanokatra fanentanana eran-tany ny Internet Sans Frontières tamin’ny tenirohy # Maalla_Gatetou (izay midika amin’ny teny Arabo Tshadiana hoe: nahoana no notapahinareo) mba hanehoana fa tofoka ny vahoaka manoloana ny sivana atao amin’ny tambajotra sosialy. Niaraka tamin’ny diabe nokarakaraina tany Paris sy tany N’Djaména ity tenirohy ity. Nanazava ny tanjon’ny fanentanana ny Tomponandraikitry ao Afrika Afovoany ao amin’ny Internet Sans Frontières, Abdelkerim Yacoub Koudougoumi, hoe :
La cyberbrutalité et le verrouillage de l’espace numérique par les autorités tchadiennes démontrent clairement la montée des pratiques autoritaires sur l'Internet. Si rien n’est fait, les bienfaits d’Internet pour le progrès démocratique dans le monde, notamment en Afrique, seront réduits à néant
Nampiseho mazava ny fitomboan'ny fomba fanao jadona amin’ny Aterineto ny herisetra an-tserasera sy ny fanidina ny sehatra nomerika ataon’ny fitondrana Tshadiana. Raha tsy misy ny dingana atao dia ho foana ny tombontsoa azo avy amin’ny Aterineto ho an’ny fandrosoana demokratika eto amin’izao tontolo izao, indrindra aty Afrika.
Nampiasa ny Twitter ihany koa ireo mpisera amin’ny Aterineto mba hanehoany ny tsy fahafaliany. Ireto misy sioka vitsivitsy tamin’ny fanentanana #Malla-Guatétou:
Raha azoko tsara, tena mahery vaika ny fiantraikan’ny tambajotra satria htantsika ny ady tsy ara-drariny manoloana ny Kalashnikovs mahafaty tao Déby .
Kalachnikov 0 # Kitendry 3
Izay no valin’ny lalao
Takatr’izy ireo fa tsy afaka hikendry ny olona maharitra ela izy ireo. Mahery kokoa noho ny FRIA ny KTIK !
Efa mihoatra ny 300 andro izay ireo Tshadiana lambda no tsy nisy Aterineto. Mila mahafantatra ireo mpitondra Afrikana fa fitaovana fiasana ny Aterineto , tsy ilaina noho izany ny manapaka azy, amin’ny fiezahana hanakombom-bava ny olona manohitra ny politikany.
Fanentanana manohitra ny sivana amin’ny Aterineto any Tchad. Efa ho 10 volana izao no nanakanan’ny fanjakana ny tambajotra sosialy any Tchad.
Niahiahy momba ny toe-draharahan’i Tchad ihany koa ireo mpanara-maso Afrikana. Nanoratra tao amin’ny bilaoginy tsa-algerie.com i Yacine Babouche , izay monina any Alzeria :
Le sujet est important et va au delà du Tchad. De Nombreux Etats africains ont désormais systématiquement recours à cette forme de censure. L'histoire d'Internet a montré que l'Afrique est un laboratoire des pires pratiques lorsqu'il s'agit de violer les libertés chèrement acquises.
Ne pas laisser passer au Tchad, c'est ne pas laisser passer ailleurs.
Zava-dehibe ny lohahevitra ary tonga hatrany ivelan’i Tchad. Maro amin’ireo firenena Afrikana no lasa mihazakazaka mampihatra ity sivana ity ankehitriny. Maneho ny tantaran’ny Aterineto fa laboratoara i Afrika hanaovana fomba ratsy indrindra raha momba ny resaka fanitsakitsahana ny fahalalahana sarotra azo. Ny tsy famelana izany hitranga ao Tchad dia midika ny tsy famelana izany hitranga na aiza na aiza ihany koa
Tsara ihany koa ny mampahatsiahy fa anisan’ny lafo indrindra ny vidin’ny fifandraisana amin’ny Aterineto, izay hatrany amin’ny roapolo avo heny raha mihoatra amin’ny faritra hafa ao amin’ny faritra.
Nanangana ny #Acte2 ny ONG Internet Sans Frontières tamin’ny hetsika iraisam-pirenena manohitra ny sivana atao amin’ny tambajotra sosialy ao Tchad izay hatao ny 19 ka hatramin’ny 28 Martsa (2019), izany hoe herinandro hanaovana hetsika hanamarihana ny herintaonan’ny tsy fisian’ny fidirana tamin’ny Aterineto tao amin’ity firenena ity. Noho izany dia navoakan’ny ONG tao amin’ny Facebook ity antso nataon’i Bintou Da ity izay mpamolavola ny soatoavin’ny vehivavy :
Geplaatst door Internet Sans Frontières op Zaterdag 2 februari 2019
17 ora izayAfrika Atsimo
4 herinandro izayMozambika